New EU sanctions target Myanmar timber and natural resources sector - EIA
LONDON: As the Council of the European Union today announcedanew wave of sanctions against the brutal military regime in Myanmar, the London-based Environmental Investigation Agency (EIA) welcomed the move for recognising the importance of the county’s natural resources sector, especially timber exports, in generating hard currency for the regime.
EIA has led the call for targeted sanctions against the regime’s timber sector and the State-owned entities and individuals profiteering from its natural resources since the military coup of 1 February this year.
EIA has been providing EU member states with detailed information over the past few months explaining the positive impacts that sanctions against the State-run Myanmar Timber Enterprise, Khin Maung Yi (the country’s environment minister) and the Forest Products Joint Venture Corporation will have for the people and forests of Myanmar.
EIA campaigners have been exposing Myanmar’s illegal timber exports and the international timber traders profiting from this crime for the past decade.
Faith Doherty, EIA Forests Campaigns Leader, said: “In support of the Civil Disobedience Movement’s call from inside Myanmar to choke off funds which support this violent and illegitimate regime, we welcome the announcement today that additional sanctions include lucrative natural resources such as the timber sector.
Find out more about Myanmar’s tainted timber and the military coup in our online resource.
ဥရောပသမဂ္ဂ၏ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှု အသစ်များက မြန်မာ့သစ်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ပစ်မှတ်ထား
လန်ဒန်။ ။ ယနေ့တွင် ဥရောပသမဂ္ဂကောင်စီက မြန်မာအကြမ်းဖက် စစ်အစိုးရအား စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှု အသစ်များ ကြေညာခဲ့ရာတွင် ထိုအစိုးရအတွက် နိုင်ငံခြားငွေ ရှာဖွေရာတွင် အရေးပါသည့် တိုင်းပြည်၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်ကဏ္ဍ၊ အထူးသဖြင့် သစ်တောကဏ္ဍကို ထည့်သွင်း အသိအမှတ်ပြု ပြစ်ဒဏ်ချခဲ့သည်ကို လန်ဒန် အခြေစိုက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ EIA က ကြိုဆိုလိုက်ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရ၏ သစ်တောကဏ္ဍနှင့်တကွ အစိုးပိုင်ဆက်စပ် လုပ်ငန်းများနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ရောင်းချခြင်းဖြင့် အမြတ်အစွန်းရနေသော လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းတို့ကို စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်ကြရန် EIA က ဦးဆောင် ဆော်သြနေခဲ့ပါသည်။
EIA ၏ စည်းရုံးလှုပ်ရှားသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ တရားမဝင် သစ်တင်ပို့မှုများနှင့်တကွ ထိုကဲ့သို့ ရာဇဝတ်မှုများမှတဆင့် အကျိုးအမြတ်ရနေသော နိုင်ငံတကာသစ်ကုန်သည်များကို ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ဖော်ထုတ်နေခဲ့ကြ၏။
EIA ၏ သစ်တောရေးရာ စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် ဖိတ်သ် ဒိုဟာတီ ကလည်း “တရားမဝင် အကြမ်းဖက် စစ်အစိုးရကို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ ငွေဝင်ပေါက်များအား ပိတ်ဆို့ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှလာတဲ့ လူထုအာဏာဖီဆန်မှု ကြွေးကြော်သံများကို ထောက်ခံခြင်းအားဖြင့် ဒီနေ့ အီးယူက ထပ်မံ ချမှတ်လိုက်တဲ့ စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်မှု အသစ်တွေထဲမှာ သစ်တောကဏ္ဍလို အကျိုးအမြတ်များစေတဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်ကဏ္ဍ ပါဝင်မှုကို ကျွန်မတို့က ကြိုဆိုလိုပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“EIA အနေနဲ့ အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဝန်ကြီးဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ရီနှင့် သစ်တောနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဖက်စပ် ကော်ပိုရေးရှင်း တို့ကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုများက ကောင်းမွန်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိခဲ့သည်ကို အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအား အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။”
“အခုအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ အီးယူကို အဖိုးတန် ကျွန်းသစ် အပါအဝင် တရားဝင်သစ် တင်ပို့လာစရာ လမ်းကြောင်း မရှိတော့ပါဘူး။”
“အခုလို အသေအချာ ပစ်မှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုတွေကြောင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်က ကုန်သည်တွေ အပါအဝင် ဒီလို တရားမဝင် လုပ်ငန်းကနေ တဦးချင်း အမြတ်ထွက်နေသူတွေဆီကို နိုင်ငံခြားငွေ စီးဆင်းမှု ရပ်တန့်အောင် လုပ်နိုင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဖိတ်သ် ဒိုဟာတီ၊ EIA သစ်တောရေးရာ စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင်၊ faithdoherty[at]eia-international.org
ပေါလ် နယူးမန်း၊ EIA စာနယ်ဇင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အကြီးတန်းအရာရှိ၊ press[at]eia-international.org
၂။ မြန်မာနိုင်ငံမှ တရားမဝင်သစ်များနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအရင်းအမြစ် အချက်အလက်များကို EIA ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ထပ်မံသွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။